Raw Cytomel (T3) powder (55-06-1) hplc =98% | AASraw Fat Kurasikirwa powder
T3 (Cytomel) powder
/ Products / Prohormone / Cytomel (T3) upfu
Rating: SKU: 55-06-1. Category: Prohormone
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweCytomel (T3) powder (55-06-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Cytomel (T3) video yeupfu
Name: Cytomel (T3) powder
Molecular Kurema: 672.96
Cytomel (T3) kushandiswa kwehupfu
Cytomel powder Mazita
Cytomel powder (CAS 55-06-1) inonziwo Cytomel, Cynomel, Cyronine, Cytomel Tabs, Euthroid, Linomel, Liothyronin, Neo-Tiroimade, Ro-Thyronine, T3 powder, Tertroxin, Thybon, Ti-Tre, Tiromel, Tironina , uye Trijodthyronin.
T3 poda haigare yakatemerwa pachayo kugadzirisa zvinetso zvetachiona inowanzoiswa neT4. Munguva yakapfuura, cytomel yaive yakarongwa kurapwa kwekuneta; zvisinei, kuwedzera kwekushungurudzika kwemoyo uye kushushikana kwemoyo kwakamanikidza kubvisa T3 kwechikumbiro icho.
T3 inoshanda pamasero emagetsi nekuwedzera metabolism yeproteine, makhahydrates, uye mafuta, pamwe nekuwedzera kwema moyo uye kubuda kweropa. T3 inoyevedza mafuta inopisa sezvo simba rako remasabolism rinowedzera zvikuru pairi kushandisa.
Izvi zvinobatsira vanovaka muviri mukuti ivo vanokwanisa kukwanisa kuve pane yakakwira koriori pre-yemakwikwi chikafu nekuti ivo vanozopisa zvakawandisa macalorie ane akakwira metabolic rate. Asi yeuka, T3 inogadzirisa (unogona kurasikirwa nemisimba yakakosha) uye kushandiswa kwenguva refu kunogona kudzikisira huremo hwemapfupa.
Cytomel (CAS 55-06-1) inonyanya kutorwa kakawanda pazuva. Nhanho dzeT3 dzinozokwira maawa anokwana kuita maviri mushure mekumwa uye dzinozopera mukati maawa mana. Kugadzirisa kuwanikwa kweT2 uye kugadziriswa kwematanho eT4 zuva rese, kuwanda-dosi inzira yekurudzira yekuita.
Multi-dosing inodzivisa kuva nechivimbo chakazara pamuviri wako kutendeuka T4 kusvika T3.
Kunyange zvazvo T3 isiri steroid, pane humwe uchapupu hwokuti anecdotal inoratidza kuti T3 inowedzera steroid kushandiswa. Izvi zvingave zvichibvira nekuda kwehuwandu hweprotheni metabolism apo uchishandisa T3.
Iwe unowanzoverenga nezvevashandi vemagetsi stacking T3 ne anabolic steroid cycle. Uyezve, clenbuterol imwe chigadzirwa chinowanzopambwa neA T3 kuti iite inobudirira zvikuru, isati yapikisa mafuta-kurasikirwa hurumende.
Vazhinji vavaki vemuviri vakashandisa mushonga uyu zvakachengeteka uye zvinobudirira Kune nyaya dzevanhu vane matambudziko nehutachiona gland iri "kuvharwa" mushure mekushandisa kweT3. Kubva pakuongorora zvinyorwa, zvinoita sekudzoreredza chiitiko chinonyanya kuitika, kana pasina hutachiona hwehutachiona.
Kuwedzera kune zvakanakira kubatsirwa kwetrosi kune imwe nyaya. Zvakawanda zvakanyorwa uye zvinofungidzirwa nezveguggulsterones uye forskolin. Zvinyorwa izvi zvinokurudzira kubudisa utachiona hwezvinhu zvose zviri zviviri, zvisinei, nzira yakananga (s) yezviito haisati yakatemwa.
Kurasikirwa kwakasiyana-siyana kunowedzera kushandiswa kushandiswa kana zvimwe zvinhu zvose zviri zviviri.
Iwe pachako, ndinotenda kuti vanopa zvishoma chete kuti vawedzere utano hwehutano uye kuti inoratidziro yehutori yehutano inogadzirisa nzira inopesana nezvimwe zvikomborero zvingawanikwa. Zvisinei, vanogona kunge vane basa rakanaka mukurota gland basa rekugadzirisa mushure mekutengesa kwe T3.
Kushandisa kukura hormone (GH) uye T3 pamwe chete kunofanirawo kufungwa. Kuwedzera kwakakosha mukutora nitrogen kunobatanidza neHG kushandiswa kunobviswa apo mazinga e T3 achiwedzera.
Mhedzisiro iyi yakapihwa kunzi T3 (CAS 55-06-1) inowedzera huwandu hweinsulini sekukura kwechinhu chinosunga mapuroteni, nekudaro ichideredza kuwanikwa kweiyo igf-1 (5). Kukura kwehormone kwatova nemafuta anopisa mhando kwariri, saka zvinoita kunge zvinodhura kusashandisa T3 panguva imwe chete neGH.
T3 powder Zvimwe mirayiridzo
Cytomel ndiyo mishonga yemishonga inodhaka iyo inogona kushandiswa nyore nyore mukuderedza kupisa kwakanyanya kubva mumuviri wako. Muzvokwadi, inoshanda kuburikidza nekushandura mahomoni ehutachiona epo. Cytomel T4 inowedzera huwandu hwemagetsi emutumbi wemushandi uye inopa simba guru yekudya zvokudya. Kana inotorwa nguva dzose, steroid inobatsira munhu kuderedza uremu hwake pamwe nekubatsira kuti uwane utano hwakanaka.
Tinogona kunyatsocherechedza kuti kune zvakawanda zvakakosha zvekushandisa Cytomel kuitira kuti uwedzere kuwedzera kwehuwandu hwemagetsi. Inowedzera kuwedzera kukwanisa kwemuviri kuumba mapuroteni. Asi izvo zvinowanzoonekwa ndezvokuti zvinoshanda semakwenzi kana zvisingaitwi nevanabolic steroids.
Ichokwadi kuti kazhinji chinhu chekupedzisira chinoshandiswa muhutano husati hwasvika nokuti ine mukurumbira wekudurura mafuta emuviri kana mafuta anonamatira seanonzi mukuvaka muviri. Ndiwo mafuta asingadi kukusiya iwe mumazuva mashomanana ekupedzisira okudya. Cytomel inoshandiswa kuve yakakurumbira pakati pevakadzi vanovaka muviri. Sezvo vakadzi vari kunonoka kudengenyeka kwemaitiro kana vachienzaniswa nevarume, zvakaoma zvikuru kuti vatsvake mhando chaiyo yekukwikwidzana, zvichipa maitiro ano nhasi. Kupera kukuru kwekoriori uye zvokudya pasi pe 1000 calorie / zuva zvinogona kudziviswa nekushandisa Cytomel. Pasina mubvunzo, vakadzi vanonyanyogadzirisa kutarisana nehutano kupfuura varume asi vanowanzofambirana zvakanaka ne 50 mcg pazuva. Zvinonyanya kukosha kuti mushonga wacho haufaniri kutorwa kwevhiki dzinopfuura 6 kana zvakadaro. Pachine mwedzi miviri ye2 isingabvi kubva kuCytomel inofanira kuteverwa. Vanhu vanotora mishonga yakawanda yemishonga kwenguva yakareba kwenguva yakareba ndeyekutyisidzika kwekugara kwechirwere chisingaperi chisingaiti.
Muchikwata chekuvaka muviri, Cytomel inoshandiswa kunyanya sekurasikirwa kwemishonga yemishonga. Mahomoni ehutachiona anotumidzwa semagetsi ekugadzirisa muviri. High level T3 inokurumidza kusimba metabolism yose yemunhu, nokudaro ichimubvumira kupisa marori akawanda uye kushandisa makoriri akawanda zvakakwana.
Kutaura pamusoro pemutengo, unofanirwa kuve wakangwarira sezvo Cytomel inoshanda zvikuru asi yakasimba hormone yekemikari. Zvinonyanya kukosha kuti munhu atange nehana yakaderera, kuwedzera zvakafanana zvishoma nezvishoma uye zvakanaka kupfuura kwemazuva mashoma. Vakawanda vevatambi vanotanga nokutora 1 25mcg tema zuva rimwe nerimwe uye kuwedzerwa chiyero chimwe nechimwe 3 kune mazuva 4 ne 1 imwe piritsi. Mamwe madhigiri akakwirira kupfuura 100 mcg pazuva haafaniri kukosha uye haana kunyatsobvunzwa.
Nzira yekutenga Cytomel powder: kutenga T3 powder (CAS 55-06-1) kubva AASraw